सुजुकीबाट पाउने प्रतिफल अन्य ब्राण्डको भन्दा राम्रो छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता सुजुकीबाट पाउने प्रतिफल अन्य ब्राण्डको भन्दा राम्रो छ
on: ५ असार २०७५, मंगलवार ०८:३७ अन्तरवार्ता
करण चौधरी कार्यकारी निर्देशक, सीजी होल्डिङ्स प्रालि
सीजी होल्डिङ्स प्रालि विगत ३८ वर्षदेखि सुजुकी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएको छ । कम्पनीले सुजुकीका ८ लाखदेखि ६० लाख मूल्य पर्ने गाडी विक्री गरिरहेको छ । यो ठूलो मूल्यअन्तरले सबै वर्गका ग्राहकलाई समेटेको कम्पनीको दाबी छ । हाल सुजुकीका १६ ओटा मोडलका गाडिहरु नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । यसै सन्दर्भमा सुजुकी गाडी, नेपालमा अटो बजारको वर्तमान अवस्था, समस्या र सम्भावनाबारे कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरीस“ग आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानी :
नेपालमा अटो बजारको व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
समग्रमा हेर्दा गतवर्ष गाडीको विक्री घटेको छ । २०७३ सालभन्दा २०७४ सालमा २४ देखि ३६ प्रतिशत विक्री कम भएको तथ्याङ्क छ । गाडीको विक्री घट्नुको प्रमुख कारण फाइनान्स÷कर्जा सजिलोसँग नपाइनु र ग्राहकले बढी पैसा शुरूमै बुझाउनुपरेकाले हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालू आव २०७४÷७५ को मौद्रिक नीति जारी गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ६५ प्रतिशतसम्म अटो लोन दिन पाउने व्यवस्था छ । यसअघि सवारीसाधनलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्दै अटोलोनमा ५० प्रतिशत सीमा राख्दै कडाइ गरिएको थियो । समग्र अटो बजारमा ७० देखि ८० प्रतिशत गाडी फाइनान्समार्फत नै विक्री हुने गर्छ । त्यसैले, अटोलोनलाई थप सहज बनाउनुपर्छ । समग्रमा बजार घटे पनि सुजुकी गाडीको विक्री भने बढेको छ ।
सीजी होल्डिङ्समार्फत के कस्ता अटोको विक्री भइरहको छ ?
हामी ३८ वर्षदेखि सुजुकी कम्पनीसँग सहकार्य गर्दै आएका छौं । हाम्रो र सुजुकी कम्पनीको उद्देश्य मिल्ने भएकाले यति लामो सहकार्य सम्भव भएको हो । हामी उचित मूल्यमा गाडी विक्री गरेर ग्राहकको आवश्यकता पूरा गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । हामी ८ लाखदेखि ६० लाख मूल्यका सुजुकी गाडी विक्री गर्छौं । यो ठूलो मूल्य अन्तरले सबै वर्गका ग्राहक सुजुकी गाडीको पहुँचमा छन् । हाल सुजुकीका १६ ओटा मोडल विक्री गरिरहेका छौं । अन्य गाडी कम्पनीको भन्दा धेरैओटा मोडल र मूल्यअन्तर पनि बढी भएकाले सजुकीको बजार बढिरहेको छ । हामीले ग्राहकलाई फाइनान्सिङ तथा इन्स्योरेन्सको सुविधा दिएका छौं ।
सुजुकीका गाडीको विशेषता के हो ? नेपाली बजारमा यसको माग कस्तो छ ?
हामी मेहनत गरेर पैसा कमाउँछौं । त्यो पैसा खर्च गरेर किन्ने सामानले राम्रो प्रतिफल देओस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । गाडीको मर्मत, इन्धनलगायत खर्च कम हुने भएकाले सुजुकीका गाडीले राम्रो प्रतिफल दिइरहेका छन् । गाडी विक्रीपछिको खर्च कम र सेवा राम्रो छ । शुरूमा गाडीको खरीद मूल्य पनि अन्य ब्राण्डजत्तिकै भएको र किनेपछि धरै खर्च गर्नु नपर्ने भएकाले यसबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सकिन्छ ।
विक्री प्रवर्द्धनका लागि कम्पनीले कस्तो व्यापार रणनीति अपनाएको छ ?
सुजुकी गाडीका उपभोक्ताको आवश्यकता के छ, त्यो पूरा गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौं । हामी निरन्तर बजार सर्वेक्षण गरिरहेका हुन्छौं । यस्ता अध्ययनबाट आएका सुझावअनुसार आफ्नो व्यावसायिक रणनीति पनि परिवर्तन गर्छौं ।
हाल उपभोक्ताको गाडी किन्ने ट्रेण्ड कस्तो छ ?
नेपाली अटो बजार परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला गाडीको छनोट मारुती ८ सय हुन्थ्यो । अहिले बजारमा पर्फर्मेन्स तथा स्पीड राम्रो भएका आरामदायी गाडीका धेरै मोडल बजारमा उपलब्ध छन् । उपभोक्तामध्ये पहिलोपटक गाडी खरीद गर्नेहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै छ । यस्ता ग्राहकमध्ये पनि मोटर साइकलबाट गाडी किन्न शुरू गरेकाहरू १०–१५ प्रतिशत छन् । त्यस्तै, डाक्टर, इञ्जिनीयर, वकिल, कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्नेहरू धेरैले गाडी किन्छन्/किनेका छन् । साथै, बाबुआमाको कमाइबाट गाडी किन्नेहरू पनि छन् । अभिभावकहरू आफ्नो छोराछोरीले राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भनेर गाडी किनिदने गर्छन् । त्यस्तै, क्षमता भएकाहरू स्वेच्छाले पनि गाडी किनिरहेका हुन्छन् । सुजुकीले यी सबै वर्गका ग्राहकलाई समेटेको छ । त्यसैले, यो सबैको विश्वासिलो ब्राण्डको रूपमा स्थापित भएको छ । हामीले १ दिनमा १ हजार कमाउनेदेखि दिनमा लाखौं कमाउनेलाई पनि गाडी विक्री गरिरहेका छौं ।
सुजुकीको विक्रीपछिको सेवाबारे बताइदिनुहोस् न !
हामी चौबीसै घण्टा ग्राहकलाई विक्रीपछिको सेवा दिइरहेका छौं । नेपालभर हाम्रा सर्भिस सेण्टर अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्डका भन्दा धेरै छन् । हामी गाडीको विक्रीपछिको सेवालाई पनि उत्तिकै महŒव दिन्छौ । अन्य कम्पनी जुन जुन ठाउँमा गएर सर्भिस सेण्टर खोल्न चाहँदैनन्, हामीहरू त्यस्ता ठाउँबाट पनि ग्राहकलाई सेवासुविधा दिइरहेका छौं । हाम्रा ग्राहक भएका सबैजसो ठाउँ समेट्नेगरी विक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराएका छौं ।
अटोमोबाइल व्यवसायको प्रवर्द्धनमा सरकारले के गर्नुपर्छ ?
गाडीको विक्री बढाउन फाइनान्स प्रणाली सहज बनाइदिनुपर्‍यो । बैङ्कहरूले जति सजिलै अटोक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह ग¥यो, त्यति नै यसको विक्री बढ्ने हो । सरकारको नीतिमै निजी गाडीलाई विलासी वस्तु होइन, अत्यावश्यक वस्तुअन्तर्गत राख्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । देशको ४० प्रतिशत राजस्व अटोक्षेत्रबाट उठ्ने गरेको छ । सरकारले गाडीबाट जसरी राजस्व उठाइरहेको छ, सोहीअनुरूप बाटो, पार्किङलगायत पूर्वाधारको सुविधा दिन सकेको छैन । भर्खरै हजार सीसीभन्दा बढीका गाडीको अन्तःशुल्क बढाइएको छ । गाडीको कारोबार अहिले मन्दीको अवस्थामा छ । त्यसैले, अन्तःशुल्क बढ्दा उपभोक्ता थप मर्कामा पर्ने देखिन्छ ।
गाडी छनोट गर्दा उपभोक्ताले केमा ध्यान दिनुपर्छ ?
ग्राहकलाई सल्लाह दिनुभन्दा पनि ग्राहकले आवश्यकताअनुसार गाडीमा के कस्ता सुविधा चाहन्छन्, त्यो बुभ्mन चाहन्छु । साथै, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारका गाडी बनाउन लगाएर नेपाली बजारमा ल्याउन चाहन्छु । ग्राहकले आफूलाई कस्तो गाडी चाहिन्छ, त्यहीअनुरूप छनोट गर्नुपर्छ ।
कम्पनीको कुनै योजना छ कि ?
हामीले सबै प्रकारका ग्राहकको चाहनालाई ध्यानमा राखी सुजुकी ब्राण्डका विभिन्न रेञ्ज बजारमा ल्याएका छौं । नेपालभर नै विक्रीपछिको सेवा अझै राम्रो बनाउने योजनाअनुरूप काम गरिरहेका छौं । साथै, आगामी दिनमा ग्राहकलाई नयाँ नयाँ मोडल तथा फिचरका गाडी उपलब्ध गराउँदै जानेछौं ।